Fashion Designer တဈယောကျဖွဈဖို့
Fashion Designer ဆိုတာ အဝတျအထညျ၊ ပိတျစအလှအပတှကေို ခတျေနဲ့အညီလှပဆနျးသဈအောငျ တီထှငျဖနျတီးသူတှဖွေဈကွပါတယျ။ အခွခေံအားဖွငျ့ဆိုရငျ ဒီဇိုငျနာတဈယောကျဟာ သူတို့လိုခငျြတဲ့ ဖကျရှငျပုံကို ပုံကွမျးဆှဲပွီးပုံဖျောကွရပါတယျ။ ဒီနောကျမှာတော့ ဘယျလိုအနအေထားကို ပုံဖျောမလဲ၊ အရောငျတှကေို ဘယျလိုရောစပျမလဲ၊ ဘယျပိတျစကို အသုံးပွုမလဲ ဆိုတဲ့အခကျြတှကေို ထညျ့သှငျးစဉျးစားကွရပါတော့တယျ။
ဖကျရှငျဒီဇိုငျနာ ဆိုတဲ့အလုပျက အတတျပညာနဲ့ အနုပညာကို ပေါငျးစပျဖနျတီးရတဲ့အလုပျတဈခုပါ။ ဒါကွောငျ့ သငျ့ရဲ့ အနုပညာတှကေို ပွသခငျြတယျဆိုရငျ သငျ့ရဲ့ အတတျပညာတှကေို အရငျဖွညျ့ထားဖို့လိုအပျပါတယျ။
ဒီဇိုငျးဆှဲတဲ့နရောမှာလညျး သာမနျ လကျနဲ့ဒီဇိုငျးဆှဲတာရှိသလို Digital sketching တှလေညျးရှိပါတယျ။ အကယျ၍ သငျက ပိုကယျြပွနျ့တဲ့ ဖကျရှငျလမျးကိုလြှောကျလှမျးလိုသူဆိုရငျ Digital Sketching ကိုပါ လလေ့ာထားဖို့လိုအပျပါတယျ။
2. Pattern ခခြွငျး။
ဖကျရှငျဒီဇိုငျနာတဈယောကျတတျမွောကျထားရမယျ့ ပညာမှာ Pattern ခခြွငျးလညျးပါဝငျပါတယျ။ အဝတျအထညျတဈခု လှလှပပနဲ့ ပုံထှကျလာဖို့အတှကျ အလိုအပျဆုံးအခကျြတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဖကျရှငျဒီဇိုငျနာတဈယောကျရဲ့ ကြှမျးကငျြမှုကိုလညျး Pattern ခခြွငျးပရိယာယျက ဖျောပွနပေါသေးတယျ။
နောကျဆုံးနဲ့ အရေးကွီးဆုံးအခကျြကတော့ အခွခေံဖွဈတဲ့စကျခြုပျစှမျးရညျပါ။ အပျေါကအရညျအခငျြးတှတေော့ ပွညျ့စုံနပေါပွီ။ ဒါပမေဲ့ သငျက စကျခြုပျတဲ့နရောမှာ အတျောဆုံးဖွဈမနသေေးဘူးဆိုရငျတော့ သငျက ဖကျရှငျဒီဇိုငျနာကောငျးတဈယောကျမဖွဈနိုငျသေးပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ အခွခေံဖွဈတဲ့ စကျခြုပျပညာမှာလညျး သငျကြှမျးကငျြဖို့လိုအပျပါတယျ။
သငျက ဖကျရှငျဒီဇိုငျနာတဈယောကျဖွဈလိုပါသလား။ ဒါဆို အောကျပါ Link တှကေနေ သငျလိုအပျတဲ့ အတတျပညာတှကေို သငျပေးနိုငျတဲ့ ဆရာတှကေို အခမဲ့ သငျ့စိတျကွိုကျရှာဖှလေိုကျပါ။
Fashion Design- https://www.sayar.com.mm/subjects/all-teachers/subject-251.html
Pattern Draft - https://www.sayar.com.mm/subjects/all-teachers/subject-364.html
Sewing Training - https://www.sayar.com.mm/subjects/all-teachers/subject-363.html
Fashion Designer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့
Fashion Designer ဆိုတာ အဝတ်အထည်၊ ပိတ်စအလှအပတွေကို ခေတ်နဲ့အညီလှပဆန်းသစ်အောင် တီထွင်ဖန်တီးသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်ဆိုရင် ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ဟာ သူတို့လိုချင်တဲ့ ဖက်ရှင်ပုံကို ပုံကြမ်းဆွဲပြီးပုံဖော်ကြရပါတယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ ဘယ်လိုအနေအထားကို ပုံဖော်မလဲ၊ အရောင်တွေကို ဘယ်လိုရောစပ်မလဲ၊ ဘယ်ပိတ်စကို အသုံးပြုမလဲ ဆိုတဲ့အချက်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြရပါတော့တယ်။
ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ ဆိုတဲ့အလုပ်က အတတ်ပညာနဲ့ အနုပညာကို ပေါင်းစပ်ဖန်တီးရတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ အနုပညာတွေကို ပြသချင်တယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ အတတ်ပညာတွေကို အရင်ဖြည့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့နေရာမှာလည်း သာမန် လက်နဲ့ဒီဇိုင်းဆွဲတာရှိသလို Digital sketching တွေလည်းရှိပါတယ်။ အကယ်၍ သင်က ပိုကျယ်ပြန့်တဲ့ ဖက်ရှင်လမ်းကိုလျှောက်လှမ်းလိုသူဆိုရင် Digital Sketching ကိုပါ လေ့လာထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
2. Pattern ချခြင်း။
ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်တတ်မြောက်ထားရမယ့် ပညာမှာ Pattern ချခြင်းလည်းပါဝင်ပါတယ်။ အဝတ်အထည်တစ်ခု လှလှပပနဲ့ ပုံထွက်လာဖို့အတွက် အလိုအပ်ဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကိုလည်း Pattern ချခြင်းပရိယာယ်က ဖော်ပြနေပါသေးတယ်။
နောက်ဆုံးနဲ့ အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ အခြေခံဖြစ်တဲ့စက်ချုပ်စွမ်းရည်ပါ။ အပေါ်ကအရည်အချင်းတွေတော့ ပြည့်စုံနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ သင်က စက်ချုပ်တဲ့နေရာမှာ အတော်ဆုံးဖြစ်မနေသေးဘူးဆိုရင်တော့ သင်က ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာကောင်းတစ်ယောက်မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် အခြေခံဖြစ်တဲ့ စက်ချုပ်ပညာမှာလည်း သင်ကျွမ်းကျင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင်က ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ဖြစ်လိုပါသလား။ ဒါဆို အောက်ပါ Link တွေကနေ သင်လိုအပ်တဲ့ အတတ်ပညာတွေကို သင်ပေးနိုင်တဲ့ ဆရာတွေကို အခမဲ့ သင့်စိတ်ကြိုက်ရှာဖွေလိုက်ပါ။